FASHIL: ”BABAAY ayay karoone ka sheegeen!” – MW Tanzania oo madaxda Afrika ku boorriyey inaysan iska qaadanin agabyada loogu deeqayo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka FASHIL: ”BABAAY ayay karoone ka sheegeen!” – MW Tanzania oo madaxda Afrika...
FASHIL: ”BABAAY ayay karoone ka sheegeen!” – MW Tanzania oo madaxda Afrika ku boorriyey inaysan iska qaadanin agabyada loogu deeqayo
(Darussalam) 23 Maajo 2020 – Waxaa dunida fara ba’an ku haya cudurka Coronavirus, waxaana kordhay baahida loo qabo agabyada lagula tacaalo oo ay ka mid yihiin kuwa wax lagu baaro (test kits), balse waxaa si la yaab leh uga boollaystay MW Tanzania ee John Magufuli.
Magufuli, oo laftiisa lagu eedeeyo qaabka uu u wajaho cudurka coronavirus ayaa sheegay inay “khaladaad farsamo yeesheen” agabyada lagu baaro cudurka.
Wuxuu sheegay in uu ciidamada amaanka Tanzanian u xil saaray inay daba galaan tayada agabka cudurkan lagu baaro sida shaybaarka, iyaga oo deeto halkaa u diray dhowr saami oo laga soo qaaday Babaay, ri iyo ido, kuwaasoo laga dhigay in dad laga soo qaaday.
Waxaa deeto saamiyadii baaray howlwadeenkii shaybaarka oo aan ka warqabin, waxayna Covid-19 ka sheegeen Ridii iyo Babaaygii, taasoo ay la yaabeen dadkii degaanku.
“Ma aha inaan iska aqbalno in deeq kasta oo dibedda ka timaadaa ay nacfi noo leedahay,” ayuu yiri Magufuli.
Previous articleMasar oo iskeed usoo debecday kana qayb geleysa kulanka Itoobiya & Suudaan (Arag sad-bursiga aan caadiga ahayn oo ay sanado badan ku biya cabaysey)
Next articleMX Karaash oo gaashaanka u daruuray isku shaandhayn uu sameeyey MW Deni & khilaafka oo sii laxaadsadey